A strip emincane resort endaweni Varadero lapho Cubans uvunyelwe kuphela ngephasi, ngokuphelele elalihlala amahhotela. Kodwa kwakungenjalo ngaso sonke isikhathi. Ngonyaka nesishiyagalolunye engamakhulu wamashumi amathathu futhi, isibonelo, kwakukhona emzaneni ekuqaleni iCape. Futhi phezu namathe isihlabathi kwaba Hacienda. Yena esasikuyo manje nayo yayibiyelwe anezele kanye engadini emangalisayo zaziziningi sika. Hacienda kanye Varadero emzaneni wabe ibangana - amaminithi ambalwa ehamba izindlela. Kwabe sekwenzekani? Hacienda uchungechunge lwamahhotela wathenga "Gran Caribe" futhi lakha ehhotela entsha esekelwe isakhiwo mlando. Futhi manje obizwa ngokuthi u Gran Caribe Club Kawama. Kuze eziyizinkulungwane ezimbili eziyishumi, yena waba ehlotshiswe uphawu izinkanyezi ezintathu. Manje eyodwa ngaphezulu ingezwe. Ihhotela njalo iyathuthukiswa, olusha. Ima umugqa wokuqala kanye siqu sandy beach yayo. Futhi kuthiwani ehhotela bathi izivakashi? Yilokhu esingayifunda kulokhu sihloko. Traveller Izibuyekezo kwasisiza ukuba sibe incazelo ephelele futhi eningiliziwe ihhotela.
Lapho hhotela itholakala futhi kanjani lapho
Kusukela Havana Isikhumulo sezindiza, lapho ihlala iningi izivakashi zakwamanye amazwe ukuba Varadero kumele bahambe amahora angaphezu kwamabili. Kodwa kuleli dolobha inezidingo emoyeni itheku layo, esesikhundleni, ngasendleleni, isimo ngamazwe. Varadero sezindiza ingamakhilomitha angu kusukela Gran Caribe Club Kawama Ihhotela 4 amabili nanhlanu kuphela. * Lo mqeqeshi owake wapheka Hacienda futhi sisesigodlweni ukuhamba ibanga kusuka emzaneni, okuyinto abantu bendawo ekhaya. Ngokuvamile izivakashi (ngekutimela ukuvakasha iphakethe engafaki yokudlulisa) ngisuka Havana Ibhasi Varadero. Lapho, zidluliselwa ku izimoto double anesitezi, okuyinto ukusebenzisa endaweni yokungcebeleka. Kodwa izivakashi "Gran Caribe Club Kawama" amakhukhi akudingeki ukuchitha kule modi lokugcina ezokuthutha. Ngemizuzu emihlanu ufika ehhotela. Njengoba lena ekuqaleni iCape (noma, uma uthanda, namathe), khona-ke azungeze eziningi izindawo lokuzijabulisa, izitolo kanye nightlife.
Land kanye nezindlu
Zomlando ekwakheni Manor uJehova awasho isitayela yokuqala ebusa kwamanye amazwe, ngasinda ngokuphepha kuze izinsuku zethu. Futhi kukhona ukwamukela amakamelo amaningana isigaba esiphakeme. Ngaphezu endlini Manor kukhona isandiso futhi Bungalows kamuva. Ngokuvamile, Gran Caribe Club Kawama Ihhotela siqukethe amane nane ezimbili storey izakhiwo. Zonke Bungalows zipendwe ngemibala ehlukile ayegcwele imibala ngokushesha kudala isimo abeneme lweholide ezindaweni ezishisayo. Ihhotela has ensimini enkulu kakhulu. Ibanga eduze kolwandle. Futhi leli qiniso kwenza kungabi shu, endaweni Bungalow wena hlala - yonke indawo kusukela beach ukuya ngeminithi. Yiqiniso, uma ungathandi ukuhamba, kungcono ucelwe close Bungalow lomshado futhi yokudlela. Kodwa khumbula ukuthi ibha nge izithombe futhi kukhona, kodwa ngoba kusihlwa kungahle kube ezinomsindo. Ngo ngumgogodla ehhotela lolwandle, eziningi abantu. Futhi endaweni eduze hhotela yokuthi kukhona isono esingesiso ukuthatha uhambo. Luscious tropical amahlamvu, izimbali, izindlela. Nokho, baxwayisa ukubuyekezwa, omiyane ukufihla ngaphansi amahlamvu. Letha omiyane oxosha!
Kuphi afake izivakashi. izinhlobo Igumbi
Gran Caribe Club Kawama - ngempela ehhotela elikhulu. Amane nane Bungalows futhi Hacienda ekwakheni izindlu amakamelo amathathu namashumi ayisithupha nanhlanu. Amakamelo isivakashi zihlukaniswe izigaba ezimbili kuphela. Okuvame kakhulu nengabizi - "okuvamile". Leli kamelo yakhelwe indawo yokuhlala ntofontofo izivakashi ezimbili umuntu ukuba abuye angenele yesithathu. usayizi Emakamelweni encane - nesikhombisa square metres. Lokhu adjoined yokugezela. Amawindi yazo zonke amazinga ezibheke engadini. Lezi amakamelo noma kuvulandi noma ithala. isigaba Okuningi ezibizayo - "Igumbi aphakeme '. Lezi amakamelo nazo eyenzelwe ezimbili, esiphezulu izivakashi ezintathu. Nokho, ubukhulu lokulala okuningi - amabili nanhlanu square metres. Ngaphezu kwalokho, zonke lezi amakamelo noma kuvulandi noma ithala. Ezinye Superior banemibono amachibi. Kodwa amakamelo amane nesishiyagalolunye kuphela frontally nazo olwandle. Ihhotela has amakamelo amaningana yezivakashi abanokukhubazeka.
Emacophelo yehhotela Gran Caribe Club Kawama has a mini-efrijini, okuyinto kuphela ukubeka amanzi okuphuza. Heat ushiye ngokuphepha ngemuva conditioner iwindi emoyeni. Ikamelo ifakwe cable TV. kungekho Russian - ukuxwayisa ukubuyekezwa, kodwa ungafunda iqiniso ngalokho okwenzeka emhlabeni. I lokulala has idiphozi ibhokisi ephephile. Ukuze Cuba, kuba yinganekwane okunethezeka, kodwa egumbini anganqamuki bamanzi ashisayo nabandayo. Igumbi elisezingeni elejwayelekile okubiza, anamanci mathandathu anesithoba euro ngabunye (abantu ababili kanye service "zonke okufakayo"). Manje ake sibone ukuthi kuwufanele ukukhokhela 15 Yebo ngabunye Igumbi aphakeme. Izibuyekezo ukubalula ukuthi kuleli gumbi uhlale ithala noma kuvulandi. Ezinye amakamelo aphakeme ukubukwa oqondile kolwandle. Amafriji kulezi amakamelo egcwele iziphuzo ingasabeli futhi ethambile, ngakho has a mini-bar. Futhi in a poker aphakeme amakamelo imishini ikhofi, ngawo ungenza iziphuzo zakho kushisa. Hlanza wonke amakamelo nsuku zonke.
Ihhotela Gran Caribe Club Kawama sezisebenza at umqondo wegama elithi "zonke okufakayo". Gastro amandla amahhotela zokudlela ezintathu a la Carte (s Creole, isiNtaliyane ngamazwe ekhishini), Amabha amabili isidlo, Amabha amathathu kanye cafe okuyinto upheka ngokukhethekile ukupheka phezu hlupha. Futhi lokho singabali ngezizathu yokudla enkulu, lapho ukudla asizwa lezitsha isitayela imodi. Esikhathini "Kawama" ibha disco njalo kusihlwa. Lamathebuli ngamunye zokudlela a la Carte ukuba zigcinelwe kusengaphambili, kodwa ukudla kwakusihlwa kuzo - mahhala ehhotela izivakashi. Inkantini futhi babe okubhukuda kanye ogwini futhi endaweni yokwamukela izivakashi. Kube wathela utshwala njengoba ukukhiqizwa-Cuban angaphandle, kodwa hhayi i-premium.
Ukuthi abantu bathini sibuyekezwe ukudla,
Ngo ehhotela Gran Caribe Club Kawama 4 * (Cuba, Varadero) ukudla muhle kakhulu. Izibuyekezo ziye zaphawula ukuthi ngokungafani Thailand neGibithe, ukudla yokudlela main ukhonza evamile for esiswini European. Imikhiqizo, naphezu kwezinkinga elalibhekene ubumpofu Imininingwane yezakhamuzi zendawo, ihhotela iba ezinhle, fresh futhi izinga. Kuzo zonke ukudla kukhona izinhlobo eziningana inyama kanye nenhlanzi. Izithelo nemifino okuningi. Izibuyekezo bathi ibha endaweni yokwamukela izivakashi yehhotela (ukhululekile, ifenisha esithambile futhi ukhululekile), has a iwayini uhlu indaba eningi kakhulu kunezinye. Abazali bathi amatafula angakwazi ukukhetha izitsha ukuthi Site ingane ukudla. Labanye zokudlela a la Carte Kunconywa ukuvakashela Creole futhi Italian. Kebabs kungemalengiso izinhlanzi okuphekwe phezu hlupha ethilomu hlupha. Theme nobusuku yokudlela ayinhloko. Kodwa engekho kanye ematfuba. Oweta ukusebenza okusheshayo: ukuletha izitsha ezintsha, amatafula ahlanzekile.
Zonke izibuyekezo uyavuma ukuthi ogwini emahhotela aphambili emhlabeni Varadero. Gran Caribe Club Kawama ine indawo side kanye ulwandle. Ngakho-ke, kusukela cishe zonke Bungalows ukuya ebhishi umzuzu noma emibili. Beach ehlanzekile omhlophe. It njalo ekuseni ecwaninga ugandaganda nge inkatho. Inombolo yabagibeli yavama. Izambulela embozwe amahlamvu esundu, okuyiwona kugcizelela umuzwa iholidi Caribbean. Okuwukuphela negative - ibha. Yena yedwa wonke lolwandle, futhi uma ufuna uzibixe elangeni kude iningi labantu, isiphuzo kwakuyodingeka ukuhamba esihlabathini hot. Kodwa pool ehhotela kakhulu ngendlela izingcezu ezine. Ezinganeni kukhona indawo ozinikele. amanzi ahlanzekile, e okubhukuda zihlanjululwa ngendlela yesimanje, futhi kusukela akuyikuba bleach. Amasimu ngokusondelene nalezi amathangi is nayo igcwele ilanga loungers, ngasendleleni, izinga kangcono, nohlaka, kunokuba okuqinile engu- imiklamo. Lo magazini lolwandle amathawula.
Gran Caribe Club Kawama 4 * sithathwa inhlangano imihlangano ibhizinisi futhi imihlangano. Ukuze wenze lokhu, ihhotela linamakamelo amabili umhlangano. Ihhotela has uhlobo lwemali, eposini, elondolo, zokuhlanza owomile, ubuhle salon, sauna, massage. amakamelo amabili ingashintshwa ngokugcwele for ukubekwa ukhululekile kwabantu abanokukhubazeka. Kulabo abafuna ukugcina kufanelekile, ejimini, izinkantolo tennis, imicibisholo, i-volleyball ne-basketball ezinkantolo. Amabhayisikili kungaba kuqashwe, kodwa le sevisi esikhokhiwe. Kodwa ulwandle linikeza zonke izinhlobo zemisebenzi non-esinenjini amanzi: buso, amaphiko, snorkel ngoba snorkel, catamarans, kayaks, surfboards. Esikhathini ehhotela kukhona esikoleni diving. Kodwa izifundo diving esikhokhiwe. Kodwa ngokuphelele, "ngoba ngakho" uzofunda umdanso salsa kanye tango. Animation abadala imini nobusuku ukusebenza. Nsuku zonke kukhona amaqembu e-disco club. Vayfay icala ehhotela, ovela ku-opharetha-Cuban.
Yiziphi izimo ababhekana nazo ehhotela izingane
Izingane ezineminyaka engu iminyaka esuka kwemine kuya nambili ubudala ungalotshwa mini-club. Lena isakhiwo esihlukile sokhuni, lapho kukhona imidlalo Igumbi, nalapho abantwana njalo wahlanganyela abafundisi abafaneleka. High izihlalo izingane - lokhu kuyinto evamile amahhotela nge izinkanyezi ezine. Kukhona in the hotel Gran Caribe Ihhotela Club Kawama inkundla bengaphandle enamathela esithambile. izithombe ezikhethekile izivakashi insizwa eyodwa kwezintathu lapho. Kodwa izivakashi bathi uhlelo kusihlwa sibonisa abadala esihlala kuyo ngokuvamile ihlanganisa ukusebenza bili ukuze izingane Wawujabulela. Ezikhona zezivakashi ehhotela - ikakhulukazi abantu baseCanada kanye izivakashi ezivela eNtshonalanga Yurophu. Animation, ngokulandelana, esiqhutshwa Spanish and English. Kodwa izingane kalula yokunqoba isithiyo esibangwa ulimi, futhi abazali bathi ingane yabo sijabule ukuba khona club mini, lapho kudlalwa nontanga yabo bakwamanye amazwe.
Uhambo: izindawo ukuya ehhotela
Ihhotela Gran Caribe Club Kawama 4 * (Varadero) has a edeskini uhambo. Kodwa ukuze bahambe baye Havana, ngokukhethekile ukufinyelela amasevisi ayo. Ngo Varadero (Street 36) has a esiteshini lapho ngesikhathi nge-iri lobunane ekuseni ibhasi e inhloko-dolobha Cuba. Futhi travel ku kubiza kuphela amakhukhi eziyishumi, hhayi engamakhulu. Izivakashi yanconywa ukuvakashela Indlu amaRom futhi cigar ifektri e Varadero. Lokhu kungabuye kwenziwe ngaphandle overpaying mhlahlandlela. Kodwa uvakashele sabona isiqhingi esihle Cayo Largo, noma ukugibela yamaphoyisa kuleli hlathi kungaba yingxenye yeqembu uhambo. Izibuyekezo ukubalula ukuthi ngoba ehhotela "Gran Caribe Club Kawama" imele emnyango eluka kuqala, bese umqeqeshi liyabuya ngokushesha, ukuze izivakashi kungathatha indawo eziphambili gumbi. Kusukela eziyisikhumbuzo ukuletha ekhaya ukuncoma rum, nogwayi kanye ikhofi okungenakuqhathaniswa.
Ihhotela Gran Caribe Club Kawama: Izibuyekezo
izivakashi Abaningi babekwazisa yokuthi ihhotela elise isakhiwo mlando. Ukuze siphile samanje Hacienda-Cuban - kuyinto ezingavamile ngaphezulu. Ukuze uqhathanise, ungakwazi ukugibela ibhasi phezu namathe, bese ubheka ezinye amahhotela. Akukho nokuncane ukusikiselwa kokuziphendukela Cuba. Futhi "Kawama" ebusa ngokuphelele umoya ezahlukene, ukukhanya, budedengu, heady. Izibankwa kukhasa engadini e wemasayizi nemibala. eduze kakhulu, kuyafaneleka ukuthatha imizuzu emihlanu, futhi ungakwazi shí ezweni Cuba "njengoba lesi". Ngo Varadero has charm yayo siqu. By the way, amanani - ngaphansana duty-free, okungenani utshwala, ikhofi kanye nogwayi. Abasebenzi ehhotela Gran Caribe Club Kawama kuyona friendly nangenkuthalo kakhulu. Igumbi Hlanza kahle. Ukudla izinga okusezingeni eliphezulu, ahlukahlukene. Kusukela pluses Izibuyekezo ngokuphindaphindiwe yisho ebhishi. Sula ulwandle futhi isihlabathi esihle emhlophe. Futhi izivakashi efana endaweni enkulu welula kanye ulwandle. Izibuyekezo uqaphele ukuthi uma ungathandi inombolo noma indawo, ungacela edilini lomshado mayelana nalolu shintsho kwezindlu. Mhlawumbe hhayi ngalolo suku nangosuku olulandelayo, uzonikwa enye Bungalow.